PSG oo kasoo gudbisay dalab cusub Ivan Rakitic iyo Barcelona oo ku jawaab celisay shir deg deg ah – Gool FM
PSG oo kasoo gudbisay dalab cusub Ivan Rakitic iyo Barcelona oo ku jawaab celisay shir deg deg ah
Dajiye August 25, 2018
(Barcelona) 25 Agoosto 2018. Wararka ka soo baxaya Spain ayaa sheegaya in Paris Saint-Germain ay dalab cusub u dirtay dhowrkii saacadood ee lasoo dhaafay kooxda Barcelona si ay u helaan saxiixa xidiga reer Croatia Ivan Rakitic.
Raadiyaha “Marca” ee dalka Spain ayaa wuxuu sheegay in kooxda heysata horyaalka Faransiiska inay soo bandhigtay dalab cusub ee gaarsiisan 100 milyan euro, si ay ugu guuleystaan adeegyada xidiga reer Croatia.
Wararka ayaa waxay intaas ku darayaan in kooxda Barcelona ay kaga jawaab celisay arintan in ay ugu yeertay walaalka la dhashay Ivan Rakitic shir deg deg ah, si loo wanaajiyo heshiiska laacibka ree Croatia maalinta Isniinta ee soo aadan.
Barcelona ayaa horey kaga diiday kooxda Paris Saint-Germain dalabyo horey ee gaarsiisnaa 70 iyo 80 million euros, waxayna Blugrana dooneysaa in Ivan Rakitic ay ku sii heyso garoonkeeda Cump Nou.
Madaxweynaha kooxda Barcelona Josep Maria Bartomeu ayaa wuxuu horey u xaqiijiyay in koox kasta ee dooneysa saxiixa Ivan Rakitic inay bixiso aduun dhan 125 milyan euro si loo kansalo heshiiskiisa.
Modric oo la filayo in markii ugu horeesay uu kusoo bilaaban doono shaxda Lopetegui kulanka Girona
Jadwalka tartanka kubadda cagta degmooyinka gobolka Banaadir oo dhamaystiran